उपेन्द्र निष्कासनमा परेको ३ घण्टा नबित्दै , गरे यस्तो घोषणा ! - News20 Media
उपेन्द्र निष्कासनमा परेको ३ घण्टा नबित्दै , गरे यस्तो घोषणा !
June 1, 2021 N20LeaveaComment on उपेन्द्र निष्कासनमा परेको ३ घण्टा नबित्दै , गरे यस्तो घोषणा !
उपेन्द्र पक्षबाट निष्कासनमा परेको ३ घण्टा नबित्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर एक्सनमा उत्रिएका छन् । काउन्टर दिदै ठाकुर पक्षले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यादव पक्षबाट ठाकुरसहित चार नेतालाई निष्कासनको निर्णय केही घण्टा अगाडि गरेका थिए । दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई पार्टी निर्णय विपरीत लागेको आरोप लगाएका छन् ।
यसअघि, आज बसेको कार्यकारिणी सदस्यहरुको बैठकबाट उपेन्द्र यादव पक्षले ठाकुरसहित चार नेतालाई पार्टीबाट निस्कासन गरेको थियो । बैठकले ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताद्धय लक्ष्मण लाल कर्ण र शर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टी सदस्यबाटै निस्कासन गरेको थियो । पार्टी सदस्यबाट निस्कासन गरिएको जानकारी निर्वाचन आयोगमा दिइएको छ ।
यसैबीच ठाकुर पक्षले सरकारमा जाने विषयमा छलफल गर्न आफ्नो बैठक बोलाएको छ। बबरमहलस्थित पार्टी कार्यालयमा अध्यक्ष ठाकुरले आफू निकट नेतासँग छलफल गरिरहेका छन्।
८ मन्त्रालय र २ राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा जान लागेको ठाकुर पक्ष कारवाहमिा परेपछि जसपामा खैलाबैला मच्चिएको छ ।
[तपाईसँग वा तपाईको वरिपरी पनि कुनै प्रतिभा, रचना र विकृति विसङ्गतीका घटना छन् भने हामीलाई [email protected] मा ईमेल गर्नुहोस् अथवा ९८६३०३३१७२ मा सिधा सम्पर्क गर्नुहोस् हामी तपाईलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ । धन्यवाद ।।]
विवेकशील साझा पार्टीका नेता उज्ज्वल थापाको निधन ,
December 15, 2020 December 15, 2020 N20
पार्टी एकता चलिरहेका बेला ओली र विप्लवबीच गोप्य भेटवार्ता भएको खुलासा , यस्तो रहेछ तयारी !
April 20, 2021 N20
अबको प्रधानमन्त्री देउवा बन्ने पक्का। ओलिलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन काङ्ग्रेसको यस्तो षड्यन्त्र तयार।
May 5, 2021 N20